Côte d’Ivoire : Rahoviana Ny Fanokafana Indray Ireo Anjerimanontolo? · Global Voices teny Malagasy
Côte d'Ivoire : Rahoviana Ny Fanokafana Indray Ireo Anjerimanontolo?
Voadika ny 31 Oktobra 2011 18:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Español, বাংলা, македонски, Français
Nandritra ny disadisa nialoha ny fifidianana tao Côte d'Ivoire, ireo anjerimanontolo telo ao amin'io firenena io (Cocody, Abobo-Adjamé sy Bouaké) dia nakatona ary tsy nasiana olona tany amin'ireo toeram-ponenan'ny mpianatra. Raha betsaka tamin'ireo Ivoariana no nadray izany fanapahan-kevitra izany tamin'ny lafiny tsara, amin'izao fotoana kosa dia maro ireo mametra-panontaniana manoloana ny manjavozavo mikasika ny ho fanokafana indray ireny anjerimanontolo ireny.
Tanjona roa no nanosika ny fanakatonana : famotsorana ireo efitrano nobodoin'ireo tsy mpianatra ara-dalàna (indrindra fa ireo mpikambana mitam-piadiana ao amin'ilay Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, na Federasionan'ny Mpianatra ao Cote d'Ivoire), ary fanavaozana ireo foto-drafitrasa, izay efa tena anaty fahasimbana tafahoatra.
Efitrano iray ao amin'ny Anjerimanontolon'i Cocody, Abidjan, 13 Oktobra 2011. Sary an'i Alex en Afrique, Copyright Demotix
Raha natao naresaka be ny fanombohana ny asa niaraka tamin'ny fitsidihan'ny Minisitry ny fampianarana ambony Cissé Bacongo, nitondràna ny mpanao gazety, tsy mampitony ny sain'ireo mpianatra, ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny velively ny tsy fahazoana antoka momba ny daty tokony hiverenan'ny fampianarana.
Asa fanamboarana ao amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ao Cocody, Abidjan, oktobra 2011, sary an'ny mpanoratra
Tato anatin'ny andro vitsivitsy, nifindra ho any amin'ireo tambajotra sosialy ny fifanakalozan-dresaka ary indrindra indrindra fa ny Twitter. Antoine Mian (@Mianseh), mpitolona ho an'ny TIC eny amin'ny sehatry ny fampianarana, dia nanipika tsara ny voka-dratsy ateraky ny fanakatonana lavareny ny anjerimanontolo :
@Mianseh ny fidonanam-poana no renin'ny#VICES (na ny haratsiana) rehetra ary nandritra ny 5 taona ny mpianatra Ivoariana no nitaingin-tamboho. Tongasoa ry #VICES#sosUniv#criseUniv#civ2010
Ireo mpitoraka bilaogy kiritika dia tsy niandry fiangaviana vao nametraka fanontaniana mivantambantana tamin'i Alain Lobognon, iray amin'ireo minisitra Ivoariana vitsy mbamanana kaonty Twitter miasa, Marc Antoine Hodonou no nanontany azy :
@Ceschod fanontaniana 1 monja: efa misy daty voatondro ve hanokafana indray ny toeram-ponenan'ny mpianatra ny #Ci225 ? #civ2010 #civ225
Tsaratsara kokoa, i Don Prince dia nandroso ala-olana iray mety ho an'ny andaniny sy ny ankilany izay afaka sady hanohizana ny asa no hamerenana koa ny fampianarana :
@princedonk Ny tiako ho lazaina, dia ny hoe afaka tohizana ny fampianarana amin'ny alalan'ny ampahany amin'ireo faritry ny anjerimanontolo nasiam-panamboarana saingy arahana fepetram-piarovana! #sosUniv
Raha ny heviny, ny Institut National Polytechnique Houphet Boigny (INP-HB) no efa nanaporofo fa azo atao tsara izany. Ity sekolim-panjakana ambony ity izay ao Yamoussoukro ( renivohitra ara-politika) dia manana sampana ao Abidjan ary ny mpianana sasany dia efa nampiantranoina ao amin'ny toeram-ponenany ao Cocody. Na eo aza ny fanakatonana ireo toeram-ponenan'ny mpianatra ao Cocody, dia efanitohy ny fampianarana ao amin'ny INP-HB araka ny ampahatsiahivan'i Prince Don azy.
@princedonk Na eo aza ny fanakatonana ireo anjerimanontolo, ny sampan'ny INPHB ao amin'ny anjerimanontolon'i Cocody nitohy niodina hatrany, ohatra tsara arahana #sosUniv
Raha nitarina tany amin'ny anjerimanontolo hafa io vahaolana io, dia ho efa voavoatra faran'izay haingana ireo efitrano sy amphithéâtres ary dia afaka niverina nianatra ny mpianatra na dia mikatona aza ny toeram-ponenana natao ho an'ireo mpianatra.
Ho an'ny hafa, ny hasarotana mifamatotra amin'ny fampiantranoana sy ny fitaterana ao Abidjan dia mahatonga fanolorana vaha-olana hafa, toy ny hoe fampianarana ampitain-davitra. Hagger55 dia mandroso soso-kevitra hoe :
@hagger55 Lesona anaty aterineto ; fomba fanao amin'ny visioconférence mba hanonerana ny taona efa natomboka @anarshy @Sanders225 #sosUniv #civ2010 mba handehanana haingana.
Saingy eo ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa voaomana ho amin'izany sy ny havitsian'ny tokantrano afaka manana fitaovana informatika ho amin'izany, kely ny vintana hidirana amin'izany vaha-olana izany hoy i Stephane Kouakou (@iamstephanek) mampahatsiahy:
@iamstephanek Hatraiza ny fampitaovana? @hager55: Lesona anaty aterineto ; fomba fanao amin'ny visioconférence mba hanonerana ny taona efa natomboka @anarshy@Sanders225#sosUniv
Mba ho fanomezan-toky ny tsirairay, ny minisitra Alain Lobognon dia nanambara hoe:
@MIANSEH Efa fantatra ny daty. Ampahafantarin'ny Govrnmt ny be sy ny maro izany amin'ny volana Novambra #ci225 Ndeha isika hisoroka ny hadisoan'ny fahiny #civ2010
Nefa notsipihany tsara hoe :
@MIANSEH Tsy sokafana an-kamehana fotsiny ireo Anjerimanontolo. Tsaboina aloha ny tsy mety alohan'ny fanokafna #ci225#civ2010
Mazava ny hafatra, mila manana faharetana ireo mpianatra ivoariana ary ho an'ireo efa nahazo taona, dia mila mijery vaha-olana hafa toy ny sekoly ambony tsy mainkina na fifaninanana hidirana aminà asam-panjakana.
Amerika Avaratra 23 ora izay